Shoelaces Factory - China shangu dzeshangu vagadziri uye vanotengesa
Paunenge uchienda kunotenga, wakamboona here kuti shangu zhinji dziri kushandisa shangu dzeshangu kuita kuti shangu dziwedzere uye dziyeke. Kazhinji kutaura, shangu dzeshangu dzine mwero wakareba. Kureba kwayo kunogona kuve kwakagadziriswa. Makara akasiyana, akasiyana maitiro uye akasiyana zvinhu, saizi anoshandiswa kune ayo shangu, ichiita kuti ive inoshamisa. Nekubatsira kweshangu, shangu dziri kuve dzakatanhamara zvakare. Iwo mavara ane akasimba mavara., Akasanganiswa akarukwa mavara, muraraungu mavara, kupenya mune rakasviba mavara uye esimbi kutsika mavara. Ndeupi ruvara ungafanane neshangu? Kana bhutsu iri mitambo yemafashoni, yakasanganiswa mavara uye muraraungu mavara anogona kushandiswa. Kana shangu dziine mavara akajairika, iwo akasimba mavara anogona kushandiswa. Kana izvi zvichishandiswa kwehusiku kumhanya, kushandisa "kupenya murima ruvara" izano rakanaka.Re marogo, dzimwe nguva logo raigona kudhindwa pashangu asi dzimwe nguva, logo yacho inogona kuwedzerwa mumabhandi eshangu. Iyo logo inogona kunge iri silkscreen kudhinda, offset kudhinda, sublimated kudhinda, yakarukwa uye nezvimwewo, pakati payo iyo yakarukwa logo yakada kudhura mumutengo. Semutengesi akakosha weMitambo yeOlympic uye Disney park, kusarudza isu kuchapa pfungwa yako yakadzama pamitengo, mhando, zuva rekusvitswa uye seyakanakisa mushure mekutengesa basa. Taura nesu nekukurumidza!